सार्वजनिक यातायातमा किन बढ्यो महिला हिंसा ? « KBC khabar
सार्वजनिक यातायातमा किन बढ्यो महिला हिंसा ?
काठमाडौं, ७ मंसिर (रासस) । पुल्चोकस्थित एउटा सहकारी संस्थामा कार्यरत भक्तपुर बोडेकी एक युवतीले केही दिनपहिले मात्रै बसमा आफूलाई दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने एक युवकलाई झर्न बाध्य बनाइन् । पुल्चोकबाट थापाथलीसम्म आउने बसमा ती युवकले पटकपटक उनको संवेदनशील अङ्गमा छुन खोजेका थिए । सुरुमा आफूले नै सम्झाउँदा नमानेपछि चालक, सहचालकलाई उनले गुनासा राखेकी थिइन् । सो घटनाका बारेमा अरू यात्रुले समेत चासो राख्न थालेपछि युवक आफैँ थापाथली ओर्लेका थिए । पीडितले प्रहरीसम्म गएर भने उजुरी गरिनन् । उनले भनिन्, “अफिस जान हतार पनि थियो, फेरि अनावश्यक झमेलामा किन फस्नू भन्ने भयो ।”
बसबाट यात्रा गर्दा आफूले धेरै पटक विभिन्न किसिमको हिंसा भोगिरहेको ललितपुर बाँडेगाउँकी एक युवतीले बताइन् । सँगैका सिटमा बस्ने पुरुषले संवेदनशील अङ्गमा हात पु–याउन खोज्ने घटना धेरै पटक भएको उनी बताउँछिन् । केही दिनपहिले मात्रै उनलाई एक पुरुषले बसमा पछ्याइरहेका थिए । पटकपटक आफूलाई हेरिरहेको महसुस गरेपछि सो ठाउँ छाडेर सर्न खोज्दा आफूतिर झनै सरेको उहाँले बताउनुभयो । अनावश्यक झमेला किन गर्नू भनी उनी गन्तव्यमा नपुगी झरेकी थिइन् । सिटमा बस्दाभन्दा उभिँदा झनै हिंसा भोग्नुपरेको सार्वजनिक यातायात सेवाका यात्रीको अनुभव छ । अनुभवी भन्छन्, “अरूले देख्दा भीड भने पनि भोग्नेले मात्रै गलत नियतले छोएको थाहा हुन्छ ।”
गत वर्षभन्दा यस वर्ष सार्वजनिक यातायातमा हुने हिंसाको घटनामा कमी आएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । पहिले मासिक दुईतीन सयसम्म घटना भएकामा गत भदौ महिनायता मासिक झण्डै ५० छ । गत वर्ष यौन दुर्व्यवहारका घटना नै १५÷२० सम्म हुने गरेकामा अहिले कम छ । ‘सेफ्टी पिन’ लाई नागरिकस्तरमा रुचाइएकाले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अभियान बढी भीडभाड भएका स्थानमा केन्द्रित छ । ‘सार्वजनिक यातायातमा महिला हिंसा’ भन्ने छुट्टै शीर्षक नभएकाले अरू शीर्षकमा मुद्दा चलिरहेको छ । कतिपय मुद्दा प्रहरी आफैँले चलाउन नसक्ने हुँदा अदालतमा गइरहेको छ ।
प्रहरीले विसं २०७६÷७७ देखि सुरु गरेको अभियानमा यस वर्ष ६३० जना पक्राउ परेका छन् । आइतबारसम्म ११९ मुद्दा दर्ता हुँदा प्रतिवादी २२२ छन् । ती घटनामध्ये अश्लील हर्कत गर्ने २४, शारीरिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने १६, अपशब्द र अश्लील गालीगलोज गर्ने पाँच र पाकेटमारी गर्ने २६५ पक्राउ र अन्य विविध ३२० छन् । प्रहरीले ४०३ जनालाई जिम्मा लगाएको थियो । गत आवमा अश्लील हर्कत गर्ने ४६, शारीरिक यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने १२३, अपशब्द र गालीगलोज गर्ने २२, पाकेटमारी २४६ र अन्य घटनामा ६७२ जना पक्राउ परेका थिए । एक हजार ८१ जना पक्राउ परेकामा ९६५ लाई जिम्मा लगाइएको थियो । सत्तरी मुद्दा दर्ता भएको र प्रतिवादी ११९ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अभियानको पहिलो वर्ष आव २०७६÷७७ मा एक हजार ७९ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये १५३ घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुँदा ३१२ प्रतिवादी थिए । अश्लील हर्कत गर्ने ८३, शारीरिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने १८५, अपशब्द र गालीगलोज गर्ने २६, पाकेटमार २२३ र अरू ५७२ पक्राउ परेको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर प्रहरीले जिल्लाजिल्लामा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको र अब वडा कार्यालयसम्म विस्तार गरिने बताइएको छ ।